Tuug indhahooda oo shana askar ka xaday laaluush ay gurteen |
Tuug indhahooda oo shana askar ka xaday laaluush ay gurteen
Askarta taraafiiga Kenya ee laaluushka ka gurta gaadiidleyda ayaa hadda ka dib ku qasbanaan doona in ay lacagta ay dadka ka furtaan si fiican u ilaashadaan, maadaama oo degmada Embu nin tuug ahi askartii qudhoodkii kaga xaday lacag badan oo ay meel dhigteen oo indhahooda oo shan ah kala cararay.
Arabacadii ayaa arintan la yaabka lihi ka dhacday goob gaadiidka lagu baadho oo ku taal wadada weyn ee isku xidhay magaalo madaxda Nairibo iyo Meru.
Qof goob joog u ahaa dhacdadan ayaa sheegay in ninka lacagta askarta ka xaday ka soo baxay kaynta wadada agteeda oo intuu haf siiyey lacagtii ay meesha dhigteen orod is dhigay.
Askarta taraafiiga ah ee goobta joogay waxay ahaayeen labada; nin iyo gabadh.
Ninkii askariga ahaa ayaa isku deyey inuu eryado ninkii lacagta ka xaday laakiin wuu gaadhi waayey oo markuu kayntii ka galay ayuu iskaga hadhay.
Askartu markii tuuggu lacagta ka qaatay halkay ku qarsanayeen wadada ayay dhanka kale ka joogeen, markaa ninku wuxu ogaa in aan askarigu isaga oo aan ka joogsan baabuurta wada maraysa markiiba ku soo ordi karayn, taasina ay fursad uu ku baxsan karo siinayso.
“Wadadu waxay martaa buuraley oo halka ay askartu gaadiidku lacagta kaga guranayeenna waxa u dhawaa shallow uu ninka lacagta ka xaday kala dhaadhacay. Markuu arkay in aanu ninkaa yar soo qaban karayn ayuu askarigii isagoo qaylinaya ka daba dhawaaqay, laakiin waxba taasi uma tarin oo kayntuu sii galay ninkii lacagta kala baxsaday” ayuu yidhi qof dhacdaa u taagnaa.
Askarta taraafiiga ahi hub ma qaataan, ee waxay had iyo goor sitaan ulo oo xataa haddii ay lacagtaa laga dhacay dhacsada is odhan lahaayeen waxba kumay ridi karayn ninkaas.
Markaa ninku lacagta ka xadayo askarta, waxa goobta taagnaa afar baabuur oo in la baadho loo joojiyey. Dhamaan dirawaliintii iyo dadkii kale ee saarnaa ayaa qosol jaanta wadhay markay arkeen waxa ku dhacay askartii gaadiidka laaluushka ka guranayey oo iyagii la furtay.
“Waxaabad moodaysay banki la dhacayo oo kale” ayuu yidhi qof goob joog ahaa.
Askarta taraafiiga ah waxa ku kallifay in ay lacagta geed hoostii ku qarsadaan waxa weeyi baadhitaannada hay’adda la dagaalanka musuqmaasuqa Kenya oo mararka qaarkood si lama filaana u soo mara waddooyinka ay taraafiigu joogaan iyagoo baabuur shacab ah wata oo si kedis ah u baadha jeebadahoodaoo haday lacag ka helaanna xidha.
Markaa maadaama oo ay taa ka baqayeen waxay is yidhaadeen, waa intaas oo la idinku soo kediyaabee meel ku qarsada gacan mariska aad maanta dadka ka gurateen.
Meelaha kale ee aanay lacagta wadada agteeda ku qarsan karin markay joogaan, askarta taraafiiga ahi qof rayid ah oo ay aaminsanyihiin ayaa lacagta laaluushka ah u gura.